အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာက ကျောင်းဆရာနဲ့ တပည့် လေးးများရဲ့ရာဇဝင်ထဲက အနော်ရထာ တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ…. - Store Feeling
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာက ကျောင်းဆရာနဲ့ တပည့် လေးးများရဲ့ရာဇဝင်ထဲက အနော်ရထာ တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ….
လူပှညဆြိုတာ သုံးဆယ့တြဈဘုံမှာ အမှင့မြှတဆြုံးနဲ့ ရဖို့ခဲယာဉတြယလြို့ မှတသြားဖူးပါတယြ။ ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝမှာ ကုသိုကောငြးမှုတှလညြေးလုပြ စားဝတနြရေေး လူမှုရေးတှနေဲ့ နေ့စဉနြပနြးလုံးနရပေီး အဆငပြှတေဲ့အခါလညြးရှိသလို အဆငမြပှမှေု ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာလညြး လူတိုငြးလိုလို ကှုံတှေ့ကှရတာ ဓမျမတာပါ။
အဲလို စိတဆြငြးရဲ စိတသြောကရောကြ စိတထြိခိုကစြရာဆိုတာတှကေို မေ့ပှဈပီး ရခဲလှတဲ့လူဘဝကှီမှာ ပွောခြွိနမြှာပွောလြိုကမြယြ စီးပှားရှာခွိနစြီးပှားရှာမယြ တရားရှာခွိနမြှာ တရားရှာမယဆြိုရငြ အပှညစြုံဆုံးဘဝမဟုတတြောငမြှ အဓိပျပါယရြှိတဲ့ ဘဝလို့ဆိုရငြ မှားမညမြထငပြါ။
အခု ဒီဗှီယိုထဲမှာတော့ တောရှာက ကွောငြးဆရာနဲ့ တပည့ြ လေးးမွားရဲ့ရာဇဝငထြဲက အနောရြထာ ဆိုတဲ့ ဇာတလြမြးလေးကို တငဆြကကြပှနကှတော မှငရြတော့ စိတထြဲ ကှညနြူးမိပါတယဗြွာ။ တကယတြော့ အပွောဆြိုတာ ဘာတရှေိမှ ညာတရှေိမှဆိုတာ ပွောရြှှငမြှုအစဈမဟုတနြိုငပြါဘူး။
လကရြှိအခွိနြ လကရြှိအခှအနေမှော မိမိဘဝကို ပွောရြှှငအြောငနြတတေခြှငြးကသာ စဈမှနတြဲ့ပွောရြှှငမြှုဖှဈပီး ပွောရြှှငခြှငြးကို မိမိမှာပဲရှာတှေ့နိုငပြါတယြ။ ကဲ ဗှီယိုဖိုငလြေးကို ကှည့လြိုကကြှပါအူးဗွာ။ သူတို့ အကအလှတှကေို သဘောကတွယဆြိုရငြ ရှဲပေးသှားလိုကပြါ။ သင့သြူငယခြငွြးတှလညြေး ကှည့ပြီးပွောရြတာပေါ့ဗွာ။
writer – ဆှာဟုနြး
လူပွညျဆိုတာ သုံးဆယျ့တဈဘုံမှာ အမွငျ့မွတျဆုံးနဲ့ ရဖို့ခဲယာဉျတယျလို့ မှတျသားဖူးပါတယျ။ ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝမှာ ကုသိုကောငျးမှုတှလေညျးလုပျ စားဝတျနရေေး လူမှုရေးတှနေဲ့ နေ့စဉျနပနျးလုံးနရေပီး အဆငျပွတေဲ့အခါလညျးရှိသလို အဆငျမပွမှေု ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာလညျး လူတိုငျးလိုလို ကွုံတှေ့ကွရတာ ဓမ်မတာပါ။
အဲလို စိတျဆငျးရဲ စိတျသောကရောကျ စိတျထိခိုကျစရာဆိုတာတှကေို မေ့ပွဈပီး ရခဲလှတဲ့လူဘဝကွီမှာ ပြောျခြိနျမှာပြောျလိုကျမယျ စီးပှားရှာခြိနျစီးပှားရှာမယျ တရားရှာခြိနျမှာ တရားရှာမယျဆိုရငျ အပွညျစုံဆုံးဘဝမဟုတျတောငျမှ အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ ဘဝလို့ဆိုရငျ မှားမညျမထငျပါ။
အခု ဒီဗှီယိုထဲမှာတော့ တောရှာက ကြောငျးဆရာနဲ့ တပညျ့ လေးးမြားရဲ့ရာဇဝငျထဲက အနောျရထာ ဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးလေးကို တငျဆကျကပွနကွေတာ မွငျရတော့ စိတျထဲ ကွညျနူးမိပါတယျဗြာ။ တကယျတော့ အပြောျဆိုတာ ဘာတရှေိမှ ညာတရှေိမှဆိုတာ ပြောျရှှငျမှုအစဈမဟုတျနိုငျပါဘူး။
လကျရှိအခြိနျ လကျရှိအခွအေနမှော မိမိဘဝကို ပြောျရှှငျအောငျနတေတျခွငျးကသာ စဈမှနျတဲ့ပြောျရှှငျမှုဖွဈပီး ပြောျရှှငျခွငျးကို မိမိမှာပဲရှာတှေ့နိုငျပါတယျ။ ကဲ ဗှီယိုဖိုငျလေးကို ကွညျ့လိုကျကွပါအူးဗြာ။ သူတို့ အကအလှတှကေို သဘောကတြယျဆိုရငျ ရှဲပေးသှားလိုကျပါ။ သငျ့သူငယျခငြျးတှလေညျး ကွညျ့ပီးပြောျရတာပေါ့ဗြာ။
writer – ဆွာဟုနျး